ရွေးကောက်ပွဲ၊ ပါတီ၊ လွှတ်တော်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို စုစည်းထားသည့် Website လွှင့်တင် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ရွေးကောက်ပွဲ၊ ပါတီ၊လွှတ်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို စုစည်းတင်ပြပေးမည့် http://www. mypilar. org website ကို လွှင့်တင်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ website အား ဇွန်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် စတင်လွှင့်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဝက်ဘ်ကို ငွေကြေးအရ United States Agency for International Development (USAID) က ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “အခုက ရွေးကောက်ပွဲ၊ ပါတီ၊ လွှတ်တော်က အချက်အလက်တွေကို တင်ဆက်နိုင်သေးတယ်။ မကြာခင်မှာတော့ အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပါ တင်ဆက်နိုင်တော့မှာပါ” ဟု website မှ တာဝန်ရှိသူ ဒေါ်မြတ်သဲသစ္စာက ဆိုသည်။
ယခုတင်ဆက်လိုက်သော http://www.mypilar.org website သည် သတင်း website တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ သတင်း အချက်အလက်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော သတင်းအချက်အလက်များကိုသာ တင်ဆက်ပေးသည့် website တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
” အချက်အလက်တွေကို ယူတဲ့နေရာတွေစုံပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေဆိုရင်တော့ အဲဒီ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေက လွှတ်တော်တွေကနေ တိုက်ရိုက်ရယူပါတယ်။ website က အချက်အလက် တွေကိုလည်း အများပြည်သူက ပြန်လည်ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်မြတ်သဲသစ္စာက ပြောသည်။
websiteတွင် ရွေးကောက်ပွဲများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ ၊ လွှတ်တော်များ၊ စာအုပ်စာတမ်း နှင့် အချက်အလက်များကို တင်ဆက်ထားသည့်အပြင် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း များကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေ တင်ဆက်နိုင်ရန် ဖန်တီးပေးထားကြောင်း သိရသည်။
← တက္ကသိုလ် တက်ရောက်မည့် မသန်စွမ်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်မည်
ကားမူးတတ်တဲ့လူတွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၈) ချက် →
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံ
March 21, 2017 USDP 2016 Comments Off on တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံ
ထိုင်းရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် CI ထုတ်ပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ကုမ္ပဏီများကို တင်ဒါခေါ်